Imicimbi Nemiklomelo - Mag Incredible Mag
Ukuhlela Umcimbi Wenkampani Equkethe Izipikha Zezihambeli
Uma usebenzela inkampani noma ingxenye yenhlangano futhi unikwe umsebenzi wokwenza amalungiselelo enkulumo ezayo, ingqungquthela, ubusuku bemiklomelo, noma yimuphi umhlangano ofanayo womphakathi noma wangasese, enye yezinto eziningi okungenzeka ubucabange ukuzenza…
Kuphela unyaka: Isikhathi Sokujabulela Amaphathi
by UMaria M
I-Bangalore idolobha elihle eliqhosha ngesiko lamazwe ahlukahlukene. Abantu abavela kuzo zonke izingxenye zezwe beze lapha ngezinhloso ezahlukahlukene, kungaba ngezifundo noma umsebenzi. Leli yidolobha okwenzeka kulo lonke elaseNdiya futhi…
Amakhonsathi Awungeke Uphuthelwe Lo nyaka E-US
by U-Alice J
Umuntu uthathe i-gander kuhlelo lwezikhathi luka-2014 lwemibukiso e-Wells Fargo Center yasePhiladelphia eveza umugqa omangalisa ngempela wamaqembu nabantu abanamakhono ahlukahlukene. Ikhaya leqembu lebhola lePhiladelphia 76ers elihlaba umxhwele, i-Wells Fargo Centre futhi iyi…
'Umusa WaseMonaco' Uvula Umkhosi Wefilimu Ka-2014 Cannes
I-Cannes Film Festival ebhekwe ngabomvu ebhekwe ngabomvu iqala namhlanje. Njengokungaguquguquki, i-Cannes ivula ngenothi elimangalisayo. Kungekudala kusukela manje futhi, umsebenzi wokuvula weCannes Film Festival umnandi. ICannes Film Festival 2014 ivulwa ngamabhayisikobho axoxwa ngokumangalisayo, uGrace…
Izizathu ezi-3 zokukhetha amabhendi omshado ngaphezu kwe-DJ
Hawu! Udidekile maqondana nokuthi ukhethe i-DJ noma uye kumaqembu womshado abukhoma? Leyo yinkinga ejwayelekile abaningi ababhekana nayo! Kunezinqwaba zokukhetha okudingeka ukwenze ukuze ube nalowo mshado wesikhulu onjengephupho! Yikuphi ukunambitheka kwekhekhe okufanele ukhethe, yiziphi izimbali…
Imicimbi Emikhulu Yomculo Namasiko Elindelwe E-UK
Kuningi okumele kwenziwe kule sizini ngemikhuba emikhulu yamasiko nezomculo ebonwa kulo lonke elase-United Kingdom. Zilungiselele ukuhlekiswa yifantasy, ubungane nobungqabavu okuzogcwaliswa yonke indawo kuhambisane nomculo nobumnandi. Kubhalwe ngezansi…
Ubudlelwano Bomkhiqizi Wokubonisa Umklomelo We-Common Messes
Uma usesha ezinye izingxenye ezihamba phambili zoMkhiqizi Wombukiso Womklomelo yindawo lapho ozothola khona amathiphu amahle kakhulu ngaphandle kokungaqiniseki noma ama-buts angaba khona. Uma kwenzeka uthola uxhumano olufanele lokudala ividiyo, awudingi…
Umhlahlandlela weSoftware yeCRM
Ukuqonda Ukuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende Inhloso yesoftware yeCRM ukuvumela amabhizinisi ukuthi akhe ngokukhululekile futhi alondoloze ubudlelwano namakhasimende amanje nawesikhathi esizayo. Kulezi zinsuku, isoftware yeCRM isuka kude nethuluzi lokuphatha oxhumana nabo ukuze ibe yipulatifomu enamandla…
Ungawakha Kanjani Umbukiso Womlingo Futhi Ube Ngumlingo Wezingane Ophumelelayo
Uma wonke umuntu eke wathola ithuba lokuba nombukiso wemilingo emaphathini abo, uzothola ukuthi lawo maqembu empeleni abe yiqembu elihle kakhulu noma elinye lamaqembu amahle kakhulu ake aba nawo. Babekhumbula izinkumbulo ezimnandi zazo zonke…